Mogadishu Journal » Ra’iisul Wasaare Kheyre oo gaaray degmada Gaalkacyo
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo gaaray degmada Gaalkacyo
Mjournal ;-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar dhulka uga soo baxay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Wafdiga uu Ra’iisul Wasaaruha hoggaaminayo ayaa waxaa magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweeyay xildhibaanno mas’uuliyiin ka tirsan Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Magalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa inta uu ku sugan yahay Magalada Gaalkacyo waxaa uu kulamo la qaadan doonaa Odayaasha & waxgaradka magaaladaas, isaga oo kala hadli doona tabashada ay qabaan iyo sidii loo dhisi lahaa Galmudug mideysan.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali kheyre ayaa sii xoojiyay dadaalada uu ku doonayo inuu ku qarameeyo ciidamada maleeshiyo beeleed ah oo haysta hub faro badan kuwaasoo ku sugan gobolada dhexe ee dalka.
Sidoo kale waxaa lagu wadaa in ra’iisul wasaare Kheyre uu booqasho ku tago deegaano ka tirsan maamulka Koofurgalbeed halkaas oo uu ay ku sugan yihiin maleeshiyo beeleedyo hubeysan.
Maxkamada Hargeysa oo xukun ku ridey weriye Cabdimaalik Coldoon
UNSOM oo War ka soo saartay booqashada uu James Swan ku tegey Garowe
Al Shabaab oo shaacisay Magacyada Masuuliyiin iyo Saraakiil ay sheegeen in ay ku dileen Weerarkii SYL by Ahmed Ali - Wed Dec 11th 16:00:02
QM: 6 qof ayaa ku dhintay duufaantii Pawan ee Soomaaliya by Ahmed Ali - Wed Dec 11th 14:32:51
Dagaal beeleed ka qarxay deegaanka Jawiil ee gobolka Hiiraan by Ahmed Ali - Wed Dec 11th 12:52:54
Wasaaradda Boostada oo soo Bandhigtay Siyaasadaha Jeegaanta, Lambarrada by Ahmed Ali - Wed Dec 11th 8:01:49
Ciidamada Soomaaliland oo qabtay maraakiib Kalluumeysi by Ahmed Ali - Wed Dec 11th 8:00:05